एडोब फ्यूज कसरी प्रयोग गर्ने बारे मार्गदर्शन क्रिएटिव अनलाइन
रिकार्ड लाजारो | | ट्यूटोरियलहरू
एडोब फ्यूज एक प्रभावशाली कार्यक्रम कि अक्षरहरू सिर्जना गर्न एक रमाईलो तरिकामा अनुमति दिन्छ तिनीहरूलाई फोटोशपमा तपाईंको डिजाइनहरूमा थप्न।
फ्यूज एडोब क्रिएटिव्ह क्लाउड सदस्यहरूको लागि उपलब्ध अनुप्रयोग हो। यो एक अनुप्रयोग हो जुन यो २०१ 2015 को अन्त्यमा सुरू गरिएको थियो, अझै बिटामा छ। सफ्टवेयरले साधन प्रदान गर्दछ सजिलैसँग 3D वर्णहरू सिर्जना र आयात गर्नुहोस् Photoshop मा। पात्रहरूले फोटोशपमा अन्य 3D तत्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन् र तिनीहरूलाई पूर्व-रेकर्ड गरिएको पोज वा एनिमेसनहरू लागू गरिएको छ।
मिक्समोमा मानिसहरू फ्यूज बनाउनका लागि जिम्मेवार छन्, र तिनीहरूका अन्य उत्पाद लाइनले थ्रीडी क्यारेक्टर विकासमा अधिक गहन कार्यको लागि डिजाइन गरिएको धेरै अन्य अनुप्रयोगहरू राख्छ।
मिक्समो र एडोब बीचको एउटा सम्झौता भनेको अनुप्रयोगहरूको सूचीमा फ्यूज समावेशीकरणको कारण हो क्रिएटिभ क्लाउडबाट। फ्यूजको साथ सिर्जना गरिएका क्यारेक्टरहरू फोटोशप सीसीमा प्रवेश गर्न सकिन्छ वा मिक्समोको थ्रीडी क्यारेक्टर लाइब्रेरीमा अपलोड गर्न सकिन्छ।
फ्यूज माया वा थ्रीडी स्टुडियो मैक्स जस्ता एक मजबूत थ्रीडी सामग्री जेनरेटर होइन, र यसैले यी कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्ने सिक्ने वक्र छैन। यद्यपि फ्यूज केहि सीमित छ के सिर्जना गर्न सकिन्छ, तर यो रमाईलो र अत्यधिक सहज अनुप्रयोग हो, आश्चर्यजनक शक्तिशाली र प्रयोग गर्न सजिलो छ।
1 एडोब फ्यूजले कसरी काम गर्छ?
2 चरित्र भेला गर्दै
4 त्यहाँ कती अनुकूलन छ?
5 र अब त्यो?
6 फोटोशपमा थ्रीडी क्यारेक्टरको प्रयोग के हो?
7 एडोब फ्यूजबाट के हराइरहेको छ?
एडोब फ्यूजले कसरी काम गर्छ?
को कार्यप्रवाह फ्यूज धेरै सरल छ र, विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखलाको साथ पनि, प्रक्रिया कहिले पनि भ्रामक हुँदैन। इन्टरफेस राम्रो निर्मित र वितरित छ त्यसोभए यो स्पष्ट छ कि तपाईं हालको चरणमा के गर्दै हुनुहुन्छ र जहाँ तपाईं अर्को चरणमा जान चाहानुहुन्छ।
यहाँ एक सानो ट्यूटोरियल गाइड छ कि तपाईं यो देख्न सक्नुहुन्छ कि एडोब फ्यूज प्रयोग गर्न कति सजिलो छ।
चरित्र भेला गर्दै
चरण १: पहिलो चरण Adobe Fuse सुरू गर्ने बेला हो चरित्र हेड चयन गर्नुहोस्। त्यहाँ छनौट को प्रकार को एक ठूलो संख्या को छनौट गर्न उपलब्ध छन्। यदि तपाइँले आफ्नो चरित्रसँग पूर्ण रूपमा मेल खाने कुनै देख्नुभएन भने, केवल एउटा मात्र छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँले सिर्जना गर्न चाहानु भएको चरित्रलाई उत्तम सूट गर्दछ (धेरै जसो टाउको र अनुहारका सुविधाहरू पछि समायोज्य हुन्छन्)।
चरण २: तपाईले एउटा टाउको छान्नु भएपछि, कार्यक्रमले तपाईंलाई स्वचालित रूपमा टोरसहरूको पुस्तकालय प्रदान गर्दछ हेड माउन्ट गर्नका लागि। फेरि, राम्रो सुरूवात बिन्दु खोज्नुहोस् किनकि विवरणहरू पछि पूर्ण रूपमा समायोज्य छन्।
चरण:: धड छनौट गरिएपछि, हतियार र खुट्टा समान तरिकाले थप गरियो। पुस्तकालयबाट हात र खुट्टाहरू जोड्ने एउटा छान्नुहोस् र कार्यक्रमले स्वत: मोडेलमा अंगहरू थप्दछ र पूर्ण रूपमा छाला र मांसपेशीहरूलाई समाहित गर्दछ। मोडेल पूर्ण रूपमा थ्रीडी हो, र बाँया प्यानलले मोडल सार्न र घुमाउन उपकरणहरू समावेश गर्दछ ताकि तपाईं कुनै पनि कोणबाट आफ्नो चरित्र जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
चरण:: मोडेल पूर्ण रूपमा भेला भएपछि, अनुकूलित ट्याबमा जानुहोस्। गुण प्यानलले धेरै फोल्डरहरू प्रकट गर्दछ, शरीरको प्रत्येक क्षेत्रका लागि एक र शरीरको त्यो खास भागका लागि बिभिन्न सेटिंग्स। जबकि फोल्डरहरू धेरै तार्किक ढ out्गले बिछ्याइएको हुन्छन्, सम्पादन गर्न शरीरको ठीक भाग छनौट गर्न छिटो तरीका छनोट उपकरण (बायाँपट्टी उपकरण प्यानलमा एर्रो) प्रयोग गर्नु हो। अर्को, शरीरको एक क्षेत्र मा क्लिक गर्नुहोस् र माउस बटन होल्डिंग गर्दा ड्र्याग गर्नुहोस् साइज र / वा त्यो भागको सापेक्ष स्थान समायोजन गर्न। सेटि automaticallyहरू स्वचालित रूपमा परिणामको रूपमा अद्यावधिक हुन्छन्। (तपाईंसँग दायाँपट्टि रहेको मेनूमा चयनकर्ताहरूबाट यो विकल्प पनि हुन्छ)।
एक पटक चरित्रको शरीर निर्माण हुन्छ र हाम्रो आवश्यकताहरूमा समायोजित हुन्छ, रहाम्रो चरित्र निर्माण गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण तत्व लुगा हो। विकल्पहरू जुन एडोब फ्यूजले तपाईंलाई वार्डरोबको लागि प्रस्ताव गर्दछ यो शरीरका अ for्गहरूको लागि प्रस्ताव गर्ने विकल्पहरू भन्दा बढी भिन्न हुन्छ।
1 चरण: कपडाका लागि प्रायः विकल्पहरू पुरुष वा महिला फ्रेममा निर्माण गरिन्छ। तर त्यहाँ युनिसेक्स पोशाकहरू पनि उपलब्ध छन्। जे भए पनि, तपाईले जुनसुकै कपडा छान्नुहुन्छ, यो स्वचालित रूपमा आकारको हुन्छ तपाईको चरित्रको शरीरमा।
चरण २: यदि तपाईले वास्तविक जीवनमा लुगा लगाउने समस्या फेला पार्नुभयो भने, तपाईले आफ्नो चरित्रको शीर्ष कपडाको साथ प्यान्ट र जुत्ताको सेट मिलाउन प्रयास नगरुन्जेल कुर्नुहोस्। भाग्यवस, एडोब फ्यूजमा जीन्सको जोडीमा प्रयास गर्नु भनेको एक बटनको क्लिक मात्र हो। त्यस्तै, सबै फुटवेयर जोडीमा आउँछ, र तपाईंले हराएको जुत्ता खोजी गर्न आवश्यक पर्दैन।
3 चरण: त्यहाँ छनौट गर्न को लागी एक राम्रो विविधता छ। (कपालको रंगबाट विचलित नहुनुहोस्, किनकि पछि परिवर्तन गर्न सकिन्छ)। शैली र लम्बाईका बारे बढि चिन्ता गर्नुहोस् किनकि यी अधिक जटिल सेटिंग्स हुन्।
चरण:: टोपी सेक्सन विशेष गरी प्रभावशाली छ किनकि त्यहाँ कपाल पत्ता लगाइएको टक्कर पत्ता लगाइएको छ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि त्यहाँ टोपीको सतहमा धकेल्दै कपालमा कुनै तालाहरू छैन (जसले हेयरस्टाइलको संयोजनलाई टोपीसँगै अझ वास्तविक बनाउँछ)। त्यहाँ एकपटक टाँसिए पछि हटाउन कुनै स्पष्ट इन्टरफेस विकल्प छैन। यो गर्नका लागि, केवल पूर्वावलोकन विन्डोमा टोपी चयन गर्नुहोस् र हटाउनुहोस् कुञ्जी थिच्नुहोस्।
5 चरण: सहायक उपकरणहरू उपलब्ध गोग्स, दाह्री, पञ्जा, मास्क, र अन्य बीचमा। स्पष्ट रूपमा यो सबै चरित्रमा यी सबै समावेश गर्न आवश्यक छैन, तर यो जान्नु राम्रो हुन्छ कि एडोब फ्यूजले हामीलाई यी विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ कती अनुकूलन छ?
यस ठाउँमा, एडोब फ्यूज एकदम फ्यान्सी ड्रेस-अप प्रोग्राम भन्दा थोरै देखिन्छ। केही भिडियो गेमहरूले खेलाडीहरूलाई उनीहरूको खेलको लागि चरित्रहरू सिर्जना गर्न यो स्तरको नियन्त्रण प्रदान गर्दछ।
के यो सबै त्यहाँ छ? सत्य हो, होइन, फ्यूजसँग प्रस्ताव गर्न अझ धेरै छ। अर्को, हामी कार्यक्रमले हामीलाई प्रदान गर्ने केही उन्नत अनुकूलन विकल्पहरूमा एक नजर राख्नेछौं।
चरण १: सीजी क्यारेक्टरहरूको सब भन्दा साधारण आलोचना मध्ये एक हो उनीहरूको अनुहारको हावभावको अभाव। एक चरित्रको आँखाको स्थिति तिनीहरू कसरी राख्नुपर्दछ त्यसमा निर्भर गर्दछ। तर एक पटक हामीले अनुहारको भावमा अलि व्यक्तित्व थपेमा, यसले हाम्रो चरित्रलाई अलि बढी व्यक्ति बनाउँदछ।
जब हामी अनुकूलन ट्याबमा फर्कन्छौं, «फेस» फोल्डरले क्यारेक्टरको मुड समायोजन गर्न विभिन्न स्लाइडरहरू समावेश गर्दछ (अभिव्यक्ति सेक्सन)। यी समायोजनहरूले भावको रूपमा केहि अनुहारको क्षेत्र परिवर्तन गर्दछ। तिनीहरू मिसाउन पनि सकिन्छ।
चरण २: अभिव्यक्ति स्लाइडरहरू उत्कृष्ट छन्, तर कहिलेकाँही हुन सक्दछ जब तपाईं केहि सुविधाहरूमा सटीक नियन्त्रण चाहानुहुन्छ, जस्तै तपाईंको मुखको स्थिति। यो अवस्था मा, त्यहाँ "अनुहार" फोल्डरमा "अतिरिक्त" भन्ने सेक्सन रहेको छ र अधिक सेटिंग्स समावेश गर्दछ राम्रो वा अधिक सूक्ष्म नियन्त्रणको लागि।
चरण:: "बनावट" ट्याबमा जानुहोस् र त्यसपछि बनावट अनुकूलन गर्न विकल्पहरूको संख्या हेर्न कपडाको कुनै चीजहरू छान्नुहोस्। केवल त्यहाँ पर्दाको तल उपलब्ध विभिन्न सामग्री र बनावट को एक पुस्तकालय छ, तर पनि प्रत्येक सतहसँग सम्पत्तीहरूको आफ्नै सेट हुन्छ जुन समायोजित गर्न सकिन्छउदाहरण को लागी, टीशर्ट र color सेतो मा सेट गर्न सकिन्छ, तर तपाईं पनि pleats संख्या र फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रण, र पनि pleats को प्रमुख दिशा।
चरण:: तपाईंको चरित्रको क्षेत्र छान्नुहोस् जहाँ छाला प्रदर्शित हुन्छ र उपलब्ध विशेषताहरूको ठूलो संख्या हेर्न छाला र अनुहार निजीकृत गर्न को लागी। छालाको रaकेवल एक र color्ग पिकर भन्दा धेरै हो: त्यहाँ "आयु, ह्यू भिन्नता, सौन्दर्य मार्कहरू, र अधिक" को लागि नियन्त्रणहरू छन्। गहिरो खन्नुहोस् र तपाइँ मेकअप, अनुहारको कपाल, र लास लम्बाइका लागि निर्दिष्ट नियन्त्रणहरू पाउनुहुनेछ - तर त्यहाँ नरोकिनुहोस्। यदि तपाईं वास्तवमै गहिरो जान चाहनुहुन्छ भने, आँखा नियन्त्रण द्वारा ब्राउज गर्नुहोस्। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, पुतली एक बिचको पुतली को रूप मा परिभाषित गर्न सकिन्छ, वा तपाईं पनि आँखा को गोरा मा देखिने छ शिरा को आकार र रंग समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण:: हामीले अहिले सम्म देखेको अनुकूलन विकल्पहरूले सायद तपाईंले सिर्जना गर्न चाहनुहुने पात्रहरूको of 5% आवश्यकताहरू समावेश गर्दछ। तर त्यहाँ एक हेराई गर्न अझ अर्को अनुकूलन सुविधा छ। यो सुविधा थोरै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। एडोब फ्यूजले क्यारेक्टरको आधार आकारका लागि मूर्तिकला क्षमता समावेश गर्दछ। बायाँ उपकरणपट्टीको तल उपकरण यसका लागि एक हो "ज्यामिति परिमार्जन गर्नुहोस्"। यो उपकरणले तपाईंलाई मोडलको वास्तविक बहुभुज परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ ब्रशको साथ उनीहरूलाई पुश र तान्दै सतह संग। यो विकल्प उपयोगी हुन सक्छ तर यो मास्टर गर्न गाह्रो छ र सजिलै राम्रो मोडेललाई बिगार्न सक्छ।
र अब त्यो?
यस बिन्दुमा, तपाईंले आफ्नो चरित्रको अनुहारको विशिष्ट गुणहरू परीक्षण गर्न र अध्ययन गर्न धेरै समय खर्च गर्नुभयो। अब तपाइँ तपाइँको चरित्र सिर्जना हुनेछ।
र अब त्यो? हामी कसरी फोटोशपमा हाम्रो चरित्र निर्यात गर्ने? ठीक छ, फ्यूजमा फाइल बचत गर्ने मानक साधनहरू र त्यसपछि आयात वा फोटोशपमा खोल्ने काम गर्दैन। सट्टामा तपाईले केहि अरू गर्नु पर्छ।
चरण १: बटन थिच्नुहोस् «CC लाइब्रेरीहरु in मा बचत गर्नुहोस् इन्टरफेस को शीर्ष दायाँ मा। एडोब फ्यूज तपाईंलाई फाइल नामको लागि र तपाईंको सीसी लाइब्रेरी भित्र फोल्डर चयन गर्न सोध्नेछ।
चरण २: फोटोशप सुरू गर्नुहोस् र नयाँ कागजात सिर्जना गर्नुहोस्। अनुसरण गर्दै पुस्तकालय प्यानल खोल्नुहोस् (विन्डोज> पुस्तकालयहरू) र चरित्र पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंले एडोब फ्यूजमा सिर्जना गर्नुभयो। चरित्रमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र "कागजातमा प्रयोग गर्नुहोस्" छनौट गर्नुहोस्। फोटोशपले दृश्यमा थ्रीडी एलिमेन्टको रूपमा चरित्र थप्नेछ।
3 चरण: कार्यस्थानलाई थ्रीडीमा परिवर्तन गर्नुहोस् र दृश्यको थ्रीडी गुणहरू चलाउनका लागि थ्रीडी प्यानल प्रयोग गर्नुहोस्। चरित्र एक थ्रीडी तत्व हो त्यसैले तपाईं क्यामेरा दृश्य, प्रकाश, छाया र सामग्रीको गुणहरू जस्तै चमक, परावर्तन, आदि समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ।
चरण:: थ्रीडी प्यानलमा, कंकाल चयन गर्नुहोस् (यसको छेउमा सानो हड्डी आइकन छ) र गुणहरू प्यानल अपडेटहरू हुन् जुन लामो अवस्थित सूची (१२ available पृष्ठहरू उपलब्ध छन्) उपलब्ध पोजिसन र एनिमेसनहरूको जुन कंकालमा लागू गर्न सकिन्छ। केवल एकमा क्लिक गर्नुहोस् र फोटोशपले यसलाई तपाईंको चरित्रमा लागू गर्दछ।
चरण:: एनिमेसन हेर्न, विन्डो> टाइमलाइन मार्फत टाइमलाइन प्यानल खोल्नुहोस्। फेरी प्ले बटन थिच्नुहोस् तपाईंको चरित्र जीवनमा आएको हेर्नका लागि।
फोटोशपमा थ्रीडी क्यारेक्टरको प्रयोग के हो?
यदि तपाईंको सृजनात्मकता पहिले नै कस्टम क्यारेक्टरहरू तपाईंको नयाँ डिजाइनहरूमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विचारहरूको साथ स्पिन भइरहेको छ भने, फोटोशपको साथ संयोजनको रूपमा एडोब फ्यूजले प्रस्ताव गरेको सम्भावनाहरू तपाईंको कल्पनाले मात्र सीमित गर्दछ।
केवल फोटोशपमा थ्रीडी क्यारेक्टर उपलब्ध हुनु ठूलो स्रोत हो, किनकि तपाईले यो दृश्यमा स्थितिमा राख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको आवश्यकता अनुसार सबै भन्दा राम्रो मिल्छ।
तर पनि तपाई रचनामा चरित्र प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने पनि अर्को विकल्प भनेको उनीहरूलाई चाखलाग्दो स्थितिमा डिजिटल पात्रहरू सिर्जना गर्न भिजुअल सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्नु हो।
एडोब फ्यूजबाट के हराइरहेको छ?
त्यहाँ केहि सुविधाहरू छन् जुन मलाई लाग्छ यो अनुप्रयोग हराइरहेको छ:
अनुकूलन स्थिति: यो वर्तमान सबैभन्दा ठूलो त्रुटि हो। तपाईंको चरित्रको लागि अनुकूलन स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै तरिका छैन। विकल्पहरू प्रि-सेट पोसेजबाट छनौट गर्न वा असंख्य चरित्र एनिमेसनहरू मार्फत खोजीमा सीमित छन् जहाँ तपाईंले खोज्नु भएको सहि स्थितिमा हिर्काउनुहुन्छ।
अनुकूलन बनावट: जबकि यो सत्य हो कि हामीसँग टेक्स्चरको ठूलो भिन्नता छ जुन उत्कृष्ट छ। जे होस्, कुनै वर्णमा अनुकूल बनावट फाइल लागू गर्न कुनै तरिका छैन। यसको अनुप्रयोगहरू चीजहरू जस्तै उदाहरणका लागि शर्टमा ग्राफिक, वा क्यारेक्टरको छालामा ट्याटू थप्नको लागि हुनेछ। फोटोशपdडी वातावरणको ज्ञानको साथ, यी थ्रीडी उपकरणहरूको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर मलाई लाग्छ यी विकल्पहरू चरित्र निर्माण चरणमा उपलब्ध हुनुपर्दछ, ताकि तिनीहरूले हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाउँदछन्।
गुणस्तर: यो एक भिडियो खेल को उपस्थिति छैन जो एक चरित्र बाहिर ल्याउन धेरै गाह्रो छ। एडोब फ्यूजको साथ सिर्जना गरिएका अक्षरहरू वास्तविक देखि हेर्न टाढा छन्।
मिक्समो क्यारेक्टरसँग मिल्दोपन: क्यारेक्टर सेभ गर्नका लागि अर्को विकल्प मिक्समोमा सेभ गर्नु हो। यसले क्यारेक्टरलाई मिक्समो साइटमा उपलब्ध थ्रीडी क्यारेक्टरहरूको अनलाइन डाटाबेसमा स्थान्तरण गर्दछ। यस कार्यप्रवाहको नकारात्मक पक्ष भनेको मिसोमो साइटमा वर्णहरू एडोब फ्यूजमा अनुकूलनको लागि डाउनलोड गर्न सकिँदैन। कार्यप्रवाह मात्र एक तर्फी हो।
मलाई आशा छ कि यस गाइडले तपाईंलाई Adobe Fuse कसरी काम गर्दछ र फोटोशपको साथ यसको एकीकरणको लागि बुझ्न मद्दत गरेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » एडोब फ्यूज कसरी प्रयोग गर्ने बारे मार्गदर्शन
डन्टे पेटकेविज भन्यो
Dante Petkewicz लाई जवाफ दिनुहोस्
मेमो मेनेसेस भन्यो
नमस्ते, मसँग एउटा प्रश्न छ, जब म PSD का पात्रहरू खोल्छु, पुस्तकालयबाट छायाँ pixelated देखा पर्छ र अधिकतर प्रभाव फ्यूजबाट आउँछ, यो किन हुन्छ?
मेमो मेनेसेसलाई जवाफ दिनुहोस्
फोटोशपमा एनिमेसनको कार्यलाई गति दिन प्लगइनहरू